R & D Simba - Shenzhen Roman Technology Co., Ltd.
Mutevedzeri wemutungamiri weRoman Technology, Wang Xianbing anoita semutungamiriri wedhipatimendi reR&D.Iye, tenzi anobva kuSouth China University of Technology, akazvipira kuBluetooth tekinoroji R&D kwemakore makumi maviri nemashanu.
Dhipatimendi reR&D rine vashandi gumi nevaviri vanobva kumabhizinesi ane mukurumbira pasi rose akadai seHutchison Harbor Ring.China State Construction Engineering Corporaton.uye Shenzhen Guowei Cesller Technology.Ivo vakatsaurirwa kuR&D kweavhareji yemakore gumi nematanhatu.
Zvakaitwa neR&D:236 core patents.Roman akahwina zita rekuremekedza re "national hi-tech enterprise" muna 2014 uye akapinzwa mu "Shenzhen's Top 100 Independent Innovation Medium and Small Enterprises" muna 2015.
Chikwata chevagadziri veRoman chinosanganisira post-70s vakahwina mibairo yekugadzira mukati nekunze kweChina, post-8Os nemazano akasiyana.uye mushure memakore ekuma90s vane mazano ekutanga. Nevakuru, vepakati, uye vagadziri vechidiki, Roman anovaka timu inotungamira yedhizaini muindasitiri yekuChina yekuteerera isina waya.
Chikwata chekugadzira cheRoman chapfuura makore gumi ekudzidzira uye zvidzidzo, kwete madhizaini chete.
Vachitarisa pane ruzivo rwemushandisi, vanosanganisa hutsva uye hutsva muzvigadzirwa.Ivo vakanaka pakugadzira zvigadzirwa uye kushandura zvakajairwa zvigadzirwa kuita zvemhando yepamusoro.
Ivo vakanaka pakubata isina waya redhiyo yekugovera keteni.Nekuziva zvinodiwa nevatengi, vanogona kunyatsoona chimiro chechigadzirwa uye zvinodiwa nevatengi.
Ivo vakaita pamusoro pe1000 dhizaini mapurojekiti uye pamusoro pe200 ODM/OEM dhizaini masevhisi ekambani.
Bluetooth Mono Headset, Noise Kanzura Earbuds, Wireless Bluetooth Earphone, Bluetooth Headset Ine Mic, Inobata Bluetooth 5.0 Earbuds, Munzeve Earphone,